भारतका सामुन्ने चुनौती: भारत सारा छिमेकमा फेल भइरहेको छ ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भारतका सामुन्ने चुनौती: भारत सारा छिमेकमा फेल भइरहेको छ !
नेपालले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले जतिसुकै चर्को–चर्को कुरा गरे पनि नेपालको मामिला बुझ्ने कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकचाहिँ निकै अत्तालिएको पाइएको छ । नेपालको मामिलाका जानकार मानिने भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनिले त नेपालको मामिलामा मात्र होइन, सारा छिमेकमा भारत फेल भइरहेको स्वीकारेका छन् ।
त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि नेपालबाट नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतका लागि चुनौती सिर्जना भएको भन्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार आउन नहुने बताएका छन् । नेपालको मामिलामा नरमरुपमा प्रस्तुत भएता पनि दुबैले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको एकैस्वरमा आरोप लगाएका छन् ।
भर्खरै मलेसियाबाट आयो ९ जना नेपालीको सबैलाई रुवाउने क्खाबर – तस्विर सहित